बाइबलमा जे लेखेको छ त्यसअनुसार, प्रभु येशू देह बन्नुभएका ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, उहाँ परमेश्‍वरका पुत्र हुनुहुन्छ। तैपनि तपाईं देहधारी ख्रीष्ट नै देखा पर्नुभएका परमेश्‍वर हुनुहुन्छ, उहाँ स्वयम् परमेश्‍वर हुनुहुन्छ भनी गवाही दिनुहुन्छ। यदि प्रभु येशू स्वयम् परमेश्‍वर हुनुहुन्छ भने प्रभु येशूले पितासँग कसरी प्रार्थनाहरू गर्न सक्नुहुन्छ? देहधारी ख्रीष्ट परमेश्‍वरका पुत्र हुनुहुन्छ कि परमेश्‍वर स्वयम् हुनुहुन्छ? | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
अघिल्लो: यहोवा परमेश्‍वरले मोशालाई प्रयोग गरेर व्यवस्थाको युगको काम गर्नुभयो। परमेश्‍वरले आखिरी दिनहरूको न्यायको काम गर्न किन कसैलाई प्रयोग गर्नुहुन्न? उहाँ किन देह बन्नैपर्छ र त्यो काम उहाँ आफैले गर्नैपर्छ?
अर्को: मैले धेरै वर्षदेखि प्रभु येशूमा विश्‍वास गरेको छु, र प्रभु येशू देह बन्नुभएका परमेश्‍वर हुनुहुन्छ भन्ने मलाई थाहा भए पनि मैले देहधारणको कुरा पूर्ण रूपमा बुझेको छैन। यदि, प्रभु फर्केर आउनुहुँदा उहाँ साँच्चै नै प्रभु येशूजस्तै मानिसको पुत्रले गर्ने कामहरू गर्दै देखा पर्नुहुन्छ भने उहाँलाई चिन्न वा उहाँको आगमनलाई स्वागत गर्न हाम्रो निम्ति असम्भव हुनेछ। मलाई लाग्छ, कि देहधारण एउटा रहस्य हो, र थोरै मानिसहरूले मात्र देहधारणको कुरा बुझेका छन्। देहधारण वास्तवमा के हो भनी बुझ्ने बारेमा कृपया, मसँग सङ्गति गर्नुहोस्।